Labsii yeroo muddamaa uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooLabsii yeroo muddamaa uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu
Ergamaa tokkoo buusanii ergamaa biraa kaa’uunis ta’e, Labsii yeroo muddamaa uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu.
Baarentuu Gadaa Irraa, Gurraandhala 17, 2018
Wayyaaneen waggoota 26n darbaniif uummattoota biyyattii afaan qawweettin ukkaamsitee saamaa, hidhaa fi ajjeesaaq turtee jirti.
Bakka kun hin milkaawunitti ammoo diraamaa fakkeessii humrii naaf dheereessa jettu homishtee karaa miidiyaalee ishii gadi dhiisaa turtee jirti. Isa goowwoomuufii danda’uus ittiin gowwoonfachuuf carraaqaa turteetti. Murni tun abbaa irree taatee osoo jirtuu dimookiraata’aa of fakkeessuuf, saamtuu taatee osoo ummattoota biyyattii addatti uummata Oromoo deegsaa jirtuu abbaa misoomaa, osoo hidhaa fi ajjeechaa raawwachaa jirtuu mootummaa nagahaa fi tasgabbii uummee biyya bulchaa jiru of fakkeessuuf yaalaa turtee jirti. Haa ta’uutii ummanni Oromoo addatti ammoo qabsaawoonni ilmaan isaa Wayyaaneen sobduu, Wayyaaneen saamtuu ta’uu waan uumama ishiirraa kaasee beekuuf harkaa hin fudhanne.
Uummanni Oromoo Wayyaaneen mootummaa misoomaa, mootummaa nageenyaa akka hin taane, faallaa sanii wayyaaneen saamtuu fi gooleessituu, murna faashsitii akka taate waan beekuuf guyyaa ishiin aangoo humnaan qabatterraa kaasee irratti qabsaawaa jira. Impaayeera itiyoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessa erga wayyaaneen shiraa fi afaan qawweettiin aangoo dhuunfatte bara 1991 irraa ka’ee nagaan biyya san keessatti argamee hin beeku. misoomni irraa hololamus hin jiru.
ittii hidhaa fi ajjeechaatu babbalate, deegatu hammaate. Dhugaan bara wayyaanee kan waggota 26n darbaniif impaayeera itiyoophiyaa keessa turee fi jiru isa kana.
Murni faashistiin TPLF jettee of waamtu tun waggoota 26n darbaniif uummattoota biyyattii addatti ammoo Oromoo irratti xiyyeeffatee duula sanyii balleessuu raawwataa turtee fi jirtu baroota bittaa ishii kana keessa ergamtoota ishii kanneen akka OPDO.DHDN fi BADN bobbaasuun saamicha, hidhaa fi ajjeeechaa raawwachaa turteen alatti diraamaa kijibaa adda addaas dalagaa turteetti. Sobaa fi sossobaa gaggeessaa turte. Haa ta’uutii ummattoonni biyyattii addatti ammoo uummanni Oromoo hidhaa, dararaa fi ajjeechaa dabalatee diraamaa fakkeessii Wayyaaneen ofiifis ta’e karaa ergamtoota ishii gaggeessaa turte osoo hin fudhatan hafaniiru. Ummanni qabsoo isaa caalaatti finiinsee, falamaan mirga abbaa biyyummaa sadarkaa hara’a irra gahe jiru irra gaheera. Amma wayyaaneen qabsoo Oromootin qilee hin deebinerra geechee jirti.
Har’a uummanni Oromoo addatti qeeroon Oromoo hidhaa-ajjeechaa,sobaa fi sossobaa Wayyaanee tuffatee bira darbee jira. Isa achi fagoo dhiifnee waanuma sirni kun waggoota 3n 4n darban uummata Oromoo irratti raawwachaa ture yoo akka fakkeenyaatti kaafnee ilaalle labsii yeroo muddamaa baasuu dabalatee waraana bobbaasuun sirnichi hidhaa, dararaa fi ajjeechaa sukanneessaa raawwateera. Sobaa fi sossobaa adda addaas OPDO jijjiruun uummata Oromoo gowwoomsuu yaalee jira.
Pireezidaantii fakkeessii naannoo Oromiyaa kan ture Muktaar kadir kaasuun ergamaa Lammaa Magrsaa jedhamu bakka buusuun uummata moogsuu yaalee jira. Haa ta’uutii diraamaan wayyaanee kun uummata Oromoo biratti fudhatama hin arganne, jijjiramni inni qabsoo Oromoo irritti fides hin jiru. Ibidda sirnicha irratti qabates hin dhaamsine.
Inumaawuu Oromoon yaalii gowwoomsaa Wayyaanee kanatti dallanee qabsoo isaa, kan mirga abbaa biyyummaaf taasisu jabeesse. Kaabineen OPDO jijjiramuun, Caalana bu’ee Callisaan, Magartuun buutee Maraattuun aangoo qabattus amma wayyaaneen aangorra jirtutti gaafiin isaa akka hin deebine waan beekuuf uummanni Oromoo qabsoo isaa caalaatti jabeessee itti fufee jira.
Wayyaaneen qabsoo bilisummaa gaafii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo addatti qeerroon irratti finiinsaa jiruun dhiphattee Muktaariin buuftee Lammaa Magarsaa muudduus, kaabinee OPDO ergamtoota ishii kaan ariitee, kaan muudduus fala osoo inargatiin kunoo arra geechee jirti. Amma qabsoon Oromoo FXG waggoota 3n darbaniif osoo walirraa hin citin gaggeeffamaa jiru dhiphisee waan qabdee gadi dhiiftu wallaalichiseera. Tibba kana ammoo diraamaa biraa kan furmaata waaraa ishiifiis ta’e biyyattiif hin finne Hayilamaariyaam Dassaalanyi aangoo gadhi dhiiseera kan jedhu holola haaraa fiddee hololaa jirti. Kunis akka fudhatama hin qabne uummanni Oromoo addatti kan FXG finiinsaa jiru qeerroon karaa adda addaa qabatamaan mirkaneessinaaniif ammo kunoo yeroo 3f yeroo waggaa hin guunne keessatti labsii yeroo muddamaa labsitee jirti. Wayyaaneen ammas gaafii Oromoo waan hubatte hin fakkaattu, ykn burjaajoftee jirti.
Maaliif jennaan Oromoon kan jechaa jiru bulchiinsi wayyaanee nagaheedha. Ammaan achi hidhaa, ajjeechaa fi holollli fakkeessii qabsoo Oromoo , gaafii mirga abbaa biyyummaa duubatti hin deebisuu jechaajira. Hayilamaariyaam aangorraa buusuun, labsii yeroo muddamaa labsuun fala hin ta’u.
Oromoon gaafii ijoo gaafii mirga abba abiyyummaa fi gaafii bilisumaa isaa amma argatutti kan duubatti hin deebine ta’uu qabatamaan mirkaneessaa jira.. Akkuma Muktaar Buustee Lammaa Magrsaa aangootti fiduun faayidaa hin fidiniif ammas Hayla Maariyaam Dassaalanyi bu’uunis ofuma gowwoomsuu malee falli wayyaneef fidu hin jiru. Kan Oromoon dhiigaa tureef mootummaa wayyaaneen duuba teechee ajaju arguufii miti. Diraamaan akkasii barri isaa dhumateera.isa kana hunduu hubachuu qaba.
Eeyyee saboonni cunqurfamoon biyyattii hundis kanuma hubachuun qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jirutti makamuun murna faashistii du’a jala geechee dhidhittachaa jiru tana dhiibee ofirraa kuffisuudha. Labsiin yeroo muddamaas ta’e hidhaa ajjeechaan, darbees hololli fakkeessii ammaan achi bakka hin qabu. Ergamaan tokkoo bu’ees ergamaan biraa muudamuun gaafii Oromoon kaasaa jiruuf fala hin ta’u.